Bristol က Beaufighter DOWNLOAD FSX - Rikoooo
အရွယ် 33.03 ကို MB
downloads ရယူရန္ 15 209
Author: Lawdog အားဖြင့် Dave Garwood, Beaufighter အသံအားဖြင့်မော်ဒယ်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ
သတိထားပါ, သာအဘို့ FSX-SP2 သို့မဟုတ် Acceleration
ဒါဟာနီးပါးအနုပညာပဲ! graphically ရှိကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုမှအချည်းနှီးဖြစ်၏နှင့်ကို virtual cockpit အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နှင့်အသေးစိတ်ပြည့်ဝ၏။ ဒါဟာဒုတိယကမ်ဘာစစ်၏လေယာဉ်တိုက်ပွဲ၏မင်္ဂလာပရိသတ်တွေဖြစ်စေမည်။
10 repaints ပါဝင်သည်နှင့်စစ်မှန်သောခြင်း simulation တိုးတက်ကောင်းမွန်သောဤမော်ဒယ်မှတိကျသောအသံ။
မကြာခဏအဖြစ်ရိုးရှင်းစွာ Beau ရည်ညွှန်းအ Bristol ကအမျိုးအစား 156 Beaufighter သည်, Bristol က Aeroplane ကုမ္ပဏီရဲ့အစောပိုင်း Beaufort တော်ပီဒိုဗုံးခွဲသူဒီဇိုင်းကိုတစ်ဦးကဗြိတိန်တာဝေးပစ်လေးလံသောတိုက်လေယာဉ်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။ နာမတျောအ Beaufighter "Beaufort" နှင့် "တိုက်လေယာဉ်" ၏တစ်ဦး portmanteau ဖြစ်ပါတယ်။
အ Beaufort မတူဘဲအ Beaufighter ရှည်လျားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခဲ့အတွက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းစစ်နီးပါးအားလုံးရုပ်ရှင်ရုံဝတ်ပြုတညဉ့်တိုက်လေယာဉ်အဖြစ်ပထမဦးဆုံး, ထို့နောက်တစ်ဦးတိုက်လေယာဉ်ဗုံးခွဲသူအဖြစ်နှင့်နောက်ဆုံးမှာတစ်ဦးတော်ပီဒိုဗုံးခွဲသူအဖြစ် Beaufort အစားထိုး။ တစ်မူကွဲလေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေး (DAP) ၏ဦးစီးဌာနအားဖြင့်သြစတြေးလျအတွက်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းနှင့် DAP Beaufighter အဖြစ်သြစတြေးလျတွင်ထင်ရှားခဲ့သည်။
အ Beaufort တစ်တိုက်လေယာဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စိတ်ကူး Bristol ကအားဖြင့် Air လေကြောင်းလိုင်းန်ကြီးဌာနမှအကြံပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါအကြံပေး Westland လေပွေအမြောက်များ-လက်နက်ကိုင်အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ်တိုက်လေယာဉ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်နှောင့်နှေးနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်။ "အ Beaufort Cannon တိုက်လေယာဉ်" ရှိပြီးသားပုံစံဒီဇိုင်းတစ်ခုကူးပြောင်းခဲ့ကတည်းကဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှု ပို. လျင်မြန်စွာလုံးဝလတ်ဆတ်တဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့်အတူထက်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်လေကြောင်းဝန်ကြီးဌာန Specification F.11 / 37 လေပွေ၏သငျ့လျြောသောနိဒါန်းဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ "ကြားဖြတ်အစိုးရ" လေယာဉ်ပျံများအတွက် Bristol ကရဲ့အကြံပြုချက်ပတ်ပတ်လည်ကျမ်းစာ၌လာသည်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Bristol ကထုတ်လုပ်မှုလိုင်းထဲကအစိတ်အပိုင်း-built Beaufort ယူပြီးအားဖြင့်တစ်ဦးရှေ့ပြေးပုံစံကိုတည်ဆောက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါရှေ့ပြေးပုံစံပထမဦးဆုံး 17 ဇူလိုင်လ 1939 အပေါ်ပျံသန်းအနည်းငယ်ထက်ပိုမိုရှစ်လအတွင်းဒီဇိုင်းပြီးနောက်ဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့် Beaufort ရဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းများတာများအသုံးပြုခြင်းမှ, စတင်ခဲ့လေသည်။ 300 စက်တွေများအတွက်ထုတ်လုပ်မှုစာချုပ်ပြီးသား F.17 / 39 ပင်ပျံသန်းထိုရှေ့ပြေးပုံစံမပြုမီသီတင်းပတ်နှစ်ပတ်ထားခဲ့သညျ။
ယေဘုယျခုနှစ်, Beaufort နှင့် Beaufighter အကြားခြားနားချက်များအသေးစားရှိကြ၏။ တောင်ပံအလယ်ဗဟိုအပိုင်းအချို့သော fittings မှခွဲအလားတူခဲ့စဉ်အဆိုပါတောင်ပံထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်များ, ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဆင်းသက်ဂီယာနှင့်ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ AFT အပိုင်းကို Beaufort ၏သူတို့အားတူညီခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဗုံးပင်လယ်အော်ချန်လှပ်ခဲ့လေးယောက်ရှေ့ဆက်-ပစ်ခတ် 20 မီလီမီတာ Hispano Mk III ကိုအမြောက်များအောက်ပိုင်းယာဉ်ကိုယ်ထည်ဧရိယာထဲမှာတပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ တစ်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းခြင်းနှင့်လူကြိုက်အလုပ်တခုကို, အထူးသဖြင့်ညဥ့်အခါနှင့်ဗုံးကြဲလေယာဉ်လိုက်ဖမ်းစဉ် - ဤကနဦးကိုယ်တိုင်လက်နက်ခဲယမ်းဗုံပြောင်းလဲရေဒါအော်ပရေတာလိုအပ်ခြင်း, 60 ဘက်စုံဗုံကနေတိုက်ကျွေးခဲ့သည်။ ရလဒ်အဖြစ်သူတို့သည်မကြာမယ့်ခါးပတ်-feed ကိုစနစျဖွငျ့အစားထိုးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအမြောက်များအတောင်၌ (303 မီလီမီတာ) ရောင်နင်း machineguns (လေးရေယဉ်လကျ်ာဘက်နှစ်ခုဆိပ်ကမ်း) တွင်ခြောက်ဦး .7.7 အားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းခဲ့ရသည်။ အနောက်ဘက်အမွောကျတပျသားများနှင့်ဗုံး-aimer များအတွက်ဒေသများတစ်တိုက်လေယာဉ်-type အမျိုးအစားလေယာဉ်မှူးအခန်း၌သာလေယာဉ်မှူးထွက်ခွာဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အဆိုပါရေကြောင်း / ရေဒါအော်ပရေတာ Beaufort ရဲ့ dorsal ဆုံလည်ခဲ့တဲ့သေးငယ်တဲ့ perspex ပူဖောင်းအောက်မှာနောက်ဘက်မှထိုင်တော်မူ၏။
အ Beaufort ၏ Bristol က Taurus အင်ဂျင်တစ်တိုက်လေယာဉ်များအတွက်လုံလောက်အစွမ်းထက်မဟုတ်ကြနဲ့ပိုပြီးအစွမ်းထက် Bristol က Hercules ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါအပိုပါဝါကိုတုန်ခါမှုနှင့်အတူပြဿနာများကိုတင်ပြ; နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းမှာသူတို့အတောင်ရဲ့အရှေ့ဘက်ကနေထုတ်မှီဝဲသောတော့ဘူး, ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Struts ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ ဒီဆွဲငင်အား (Cog) ရှေ့ကိုတစ်ဦးလေယာဉ်ဒီဇိုင်းကိုများအတွက်မကောင်းတဲ့အရာ၏ဗဟိုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာမရှိသောအာကာသတစ်ခုတိုက်လေယာဉ်တစ်ဗုံး aimer အတှကျလိုအပျခဲ့သကဲ့သို့, နှာခေါင်းတိုအားဖြင့်ပြန်လည်ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ ဒါကတောင်ပံနောက်ကွယ်ကယာဉ်ကိုယ်ထည်၏အများဆုံးသွင်း ထား. , ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်ရှိရာ Cog နောက်ကျောသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ယခုနောက်ထပ်ရှေ့ဆက်ပြီးနှာခေါင်း၏အစွန်အဖျားထက်အင်ဂျင် cowlings နှင့်ပန်ကာနှင့်တကွ, Beaufighter တစ်ဝိသေသလက္ခဏာများပေးသော Stubby အသွင်အပြင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
သြစတြေးလျအတွက် Beaufort ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တော်ဝင်သြစတြေးလျလေတပ်အားဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံလုပ် Beaufighters ၏မြင့်မားအောင်မြင်အသုံးပြုမှု, Beaufighters နောက်ပိုင်းတွင် 1944 မှလေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေး (DAP) ၏သြစတြေးလျဦးစီးဌာနကတည်ဆောက်လျှက်မှဦးဆောင်။ အဆိုပါ DAP ရဲ့မူကွဲအမာကု 21 အဖြစ်လူသိများသည့်တိုက်ခိုက်မှု / တော်ပီဒိုဗုံးခွဲသူခဲ့: ဒီဇိုင်းအပြောင်းအလဲများ Hercules VII သို့မဟုတ် XVIII အင်ဂျင်နှင့်လက်နက်တပ်ဆင်အတွက်အချို့သောအသေးအဖှဲအပြောင်းအလဲများပါဝင်သည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံကထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစက်တင်ဘာလ 1945 အတွက်ပိတ်ပစ်အချိန်ကိုအသုံးပြုပုံ 5,564 Beaufighters Bristol ကနှင့်လည်း Fairey လေကြောင်းကုမ္ပဏီ, လေယာဉ်ထုတ်လုပ်မှု၏ (498) ဝန်ကြီးဌာန (3336) နှင့်အမြစ် (260) ကအင်္ဂလန်နိုင်ငံတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
သြစတြေးလျကုန်ထုတ်လုပ်မှု 1946 အတွက်စဲသောအခါ, 365 Mk.21s built ခဲ့သည်။
အမှတ် 1 တပ်မှ, မြောက်အာဖရိကရှိ Bristol Beaufighter Mk 252
တိုက်လေယာဉ်စံချိန်စံညွှန်းအားဖြင့် Beaufighter Mk.I မဟုတ်ဘဲမိုးသည်းထန်စွာနှင့်နှေးကွေးခဲ့သည်။ ဒါဟာ 16,000 ပေ (7,000 ဍ) မှာ 335 ပေါင် (540 ကီလိုဂရမ်) ၏တစ် All-တက်အလေးချိန်နှင့်သာ 16,800 တစ်နာရီမိုင် (5,000 km / h) ၏အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သျောလညျးဤအရာမဟုတ်ရင်မြတ်သော Westland လေပွေပြီးသားကြောင့်၎င်း၏ Rolls-Royce Peregrine အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူပြဿနာများရပ်တန့်ခဲ့၏နောက်ထပ်ထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်အချိန်ရရှိနိုင်ခဲ့သမျှသောခဲ့သည်။
အဆိုပါ Beaufighter ကိုပထမဦးဆုံးဗြိတိန်နိုင်ငံဝေဟင်ကြားဖြတ် (AI) ကိုရေဒါအစုံနီးပါးအတိအကျတစ်ချိန်တည်းမှာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းချွတ်လာမယ့်ကိုယ်တိုင်ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အနိမ့်ယာဉ်ကိုယ်ထည်ထဲမှာတပ်ဆင်ထားလေးပါး 20 မီလီမီတာအမြောက်များနှင့်တကွ, နှာခေါင်းအရေဒါအင်တင်နာလိုက်လျောညီထွေနိုင်ကြောင်းကို၎င်း, ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏အထွေထွေကျယ်ဝန်သောလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ရန် AI အပစ္စည်းကိရိယာများ enabled ။ 20,000 ပေါင် (9,100 ကီလိုဂရမ်) မှတောင်မှ loaded လေယာဉ်ဂျာမန်ဗုံးကြဲလေယာဉ်အမီလိုက်ရန်လုံလောက်သောအစာရှောင်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်း 1941 အသုံးပြုပုံကြောင့် Luftwaffe ညဉျ့အခါစီးနင်းမှုတစ်ခုထိရောက်သောတန်ပြန်ခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့ကြမ်းတမ်းခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမကြာမီအမှုထမ်းတွေနဲ့လေယာဉ်ပျံလူကြိုက်များလုပ်ရှိရာ Beaufighter များ၏အမျိုးမျိုးသောအစောပိုင်းမော်ဒယ်များမကြာမီ, ပြည်ပဝန်ဆောင်မှုစတင်။
တစ်ဦးကညတိုက်လေယာဉ် Mk VIF AI အမာကု VIII ရေဒါတပ်ဆင်ထားမတ်လ 1942 အတွက်တပ်ခွဲမှထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်က de Havilland ခြင်နှောင်းပိုင်း 1942 မှနှစ်လယ်ပိုင်းအတွင်းညဉ့်ကိုတိုက်လေယာဉ်အခန်းကဏ္ဍအတွက်လွှဲပြောင်းယူသကဲ့သို့, လေးလံ Beaufighters ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆင်ရေးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုအဓိကပြဇာတ်ရုံထဲမှာ Anti-ရေကြောင်း, မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးနှင့်တာဝေးပစ် interdiction ကဲ့သို့သောအခြားနယ်ပယ်များတွင်အဖိုးတန်ပံ့ပိုးမှုများကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
မြေထဲပင်လယ်၌, USAAF ရဲ့ 414th, 415th, 416th နှင့် 417th ညတိုက်လေယာဉ်တပ်ခွဲဇူလိုင်လ 100 မှာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအောင်ပွဲရရှိ, 1943 ၏နွေရာသီ 1943 Beaufighters လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ နွေရာသီမှတဆင့်တပ်ခွဲနေ့ခင်းဘက်ယာဉ်တန်းအစောင့်အကြပ်များနှင့်မြေပြင်-တိုက်ခိုက်မှုစစ်ဆင်ရေးနှစ်ခုလုံးကောက်ယူ, ဒါပေမယ့်အဓိကအားဖြင့်ညအချိန်တွင်ကာကွယ်ရေးကြားဖြတ်မစ်ရှင်ပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။ အ Northrop P-61 က Black မုဆိုးမတိုက်လေယာဉ်ဒီဇင်ဘာလတွင် 1944 ရောက်ရှိမည်စတင်ခဲ့ပေမယ့်, USAAF Beaufighters နှောင်းပိုင်းစစ်ပွဲအတွက်သည်အထိအီတလီနှင့်ပြင်သစ်တွင်တညဉျ့စစ်ဆင်ရေးပျံသန်းဖို့ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
1943 ၏ဆောင်းဦးရာသီအားဖြင့်, အခြင်အ RAF ၏မူလတန်းညဉျ့အခါတိုက်လေယာဉ်အဖြစ် Beaufighter အစားထိုးဖို့လုံလောက်တဲ့နံပါတ်များအတွက်ရရှိနိုင်ခဲ့။ Beaufighters ပျံသန်းနေစဉ်စစ်၏အဆုံးအားဖြင့် RAF ယူနစ်နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်အချို့သော 70 လေယာဉ်မှူးအေ့စ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
စမျးသပျသောဂျာမန်လျှို့ဝှက်စစ်ဆင်ရေးယူနစ် KG 200 ဖြင့်ပျံသန်းခဲ့ပြီးမှအဖြစ် Beaufighter ဝတ္ထု KG 200 ဖို့နောကျဆကျတှဲအတွက်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်, အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်လျှို့ဝှက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဖမ်းမိရန်သူလေယာဉ် operated ။ ကမ်းရိုးတန်းစစ်ဌာနချုပ်
1941 အ Beaufighter Mk.IC တာဝေးပစ်လေးလံသောတိုက်လေယာဉ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြင်တော်မူ၏။ ဒီအသစ်မူကွဲမော်လ်တာကနေ operating အမှတ် 1941 တပ်မှနေငျးကှာနှင့်အတူမေလ 252 အတွက်ဝန်ဆောင်မှုဝင်ကြ၏။ အဆိုပါလေယာဉ်တင် Coastal စစ်ဌာနချုပ်ယခုပေါရာဏ Beaufort နှင့် Blenheim အစားထိုးခြင်း, Beaufighter ၏အဓိကအသုံးပြုသူဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်းရေကြောင်း, လေယာဉ်နှင့်မြေပြင်ပစ်မှတ်တွေကိုဆန့်ကျင်မြေထဲပင်လယ်အတွက်ဒါထိရောက်သောသက်သေပြခဲ့သည်။
ကမ်းရိုးတန်းစစ်ဌာနချုပ်နှစ်လယ်ပိုင်း 1942 အတွက်ကို up-rated Mk.VIC ၏ပေးပို့ယူလာတယ်။ 1942 Mk VICs ၏အဆုံးအားဖြင့် (18 မီလီမီတာ) တွင် (457 မီလီမီတာ) တွင်ဗြိတိသျှ 22.5 သို့မဟုတ်အမေရိကန် 572 သယ်ဆောင်ရန်သူတို့ကို enable လုပ်ထားခြင်း, တော်ပီဒို-တင်ဆောင်လာသောဂီယာတပ်ဆင်ထားပြီးခံခဲ့ကြသည်ပြင်ပမှတော်ပီဒို။ Beaufighters အားဖြင့်ပထမဦးဆုံးအောင်မြင်သောတော်ပီဒိုတိုက်ခိုက်မှုအမှတ် 1943 တပ်မှနော်ဝေပယ်နှစ်ခုကုန်သည်သင်္ဘောများနစ်မြုပ်နှင့်အတူဧပြီလ 254 လာ၏။
အဆိုပါ Hercules Mk XVII, 1,735 ပေ (1,294 ဍ) မှာ 500 မြင်းကောင်ရေ (150 kW) ဖွံ့ဖြိုးဆဲ, သာမန်အဖြစ်လူသိများ TF Mk.X (တော်ပီဒိုတိုက်လေယာဉ်), ထုတ်လုပ်ရန်ဖို့ Mk VIC airframe တပ်ဆင်ခဲ့ပါတယ် "Torbeau ။ " အဆိုပါ Mk X ကိုအ Beaufighter ၏အဓိကထုတ်လုပ်မှုအမှတ်အသားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ "အ Torbeau" ၏သပိတ်မူကွဲအ Mk.XIC designated ခဲ့သည်။ Beaufighter TF XS တော်ပီဒိုသို့မဟုတ် "60lb" RP-3 ဒုံးကျည်နှင့်အတူလှိုင်းထိပ်အမြင့်မှာတင်ပို့အပေါ်တိကျစွာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လိမ့်မယ်။ အ Mk XS ၏အစောပိုင်းမော်ဒယ်များမက်ထရစ်-လှိုင်းအလျား ASV နှာခေါင်းနှင့်ပြင်အတောင်ပံပေါ်သယ်ဆောင် "herringbone" အင်တာနာနှင့်အတူ (Air-To-မျက်နှာပြင်တန်ဆာကို) ရေဒါယူသွားဒါပေမဲ့ဒီတစ်၌ကျိန်းဝပ်အ centimetric AI အမာကု VIII ရေဒါအားဖြင့်နှောင်းပိုင်း 1943 အတွက်အစားထိုးခဲ့သည် All-ရာသီဥတုနှင့်ညဉ့်တိုက်ခိုက်မှုအားဖွင့် "အပ်ချုပ်လက်စွပ်-နှာခေါင်း" radome ။
အ Lincolnshire ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင် RAF မြောက်ကိုရီးယား Coates မှာအခြေစိုက် Coastal စစ်ဌာနချုပ်၏အမြောက် Coates သပိတ် Wing သည်, Torbeaus တော်ပီဒိုနှင့်အတူအနိမ့်အဆင့်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ် flak ဖိနှိပ်ဖို့အမြောက်များနှင့်ဒုံးကျည်ကို အသုံးပြု. Beaufighters ၏ကြီးမားသောဖွဲ့စည်းမှုပေါင်းစပ်သောနည်းပရိယာယ်ကိုတီထွင်။ ဤရွေ့ကားနည်းဗျူဟာရေကြောင်း၏ 1943 တန်ချိန် (10 တန်ချိန်) နစ်မြုပ်ခဲ့လယ်ပိုင်း 29,762 ၌၎င်း, တစ်ဦး 27,000-လကာလအတွက်အလေ့အကျင့်ထဲသို့သွင်းထားခဲ့ကြသည်။ ရေကြောင်းညဉ့်နေစဉ်အတွင်းဆိပ်ကမ်းကနေပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြသောအခါနည်းပရိယာယ်ထပ်မံအဆင်ပြေအောင်ခဲ့ကြသည်။ မြောက်ကိုရီးယား Coates သပိတ် Wing ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏အကြီးဆုံး Anti-တင်ပို့အင်အားအဖြစ် operated နှင့် 150,000 Beaufighters နှင့် 136,100 aircrew ၏ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ရေကြောင်းနှင့် 117 သင်္ဘောတန်ချိန် (120 တန်ချိန်) ဦးသေဆုံးသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံး 241 ကျော်ဘို့မှတ်။ ဒီ 1942-45 အကြားအားလုံးသပိတ်အတောင်ပံများကနစ်မြုပ်တစ်ဝက်စုစုပေါင်းအရွယ်အစားတန်ချိန်ခဲ့သည်။ ပစိဖိတ်စစ် အဆိုပါ Beaufighter လယ်ပိုင်း 1942 အတွက်အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဒေသတွင်တပ်ခွဲမှာရောက်ရှိသည်။ ဒါဟာမကြာခဏပြောပါတယ်ခဲ့ - ကမူလကလျင်မြန်စွာဗြိတိသျှသတင်းစာဆရာများကတက်ယူ RAF whimsy တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းခဲ့ပေမယ့် - ဂျပန်စစ်သား "သေခြင်းတီးတိုးရွတ်ဆိုရင်း" အဖြစ် Beaufighter ရည်ညွှန်းကြောင်း, တိုက်ခိုက်နေတဲ့လေယာဉ်မကြာခဏကြားသိ (သို့မဟုတ်တှေ့မွငျရ) မဟုတ်ခဲ့ကြနေလည်းသောကွောငျ့လွန်းသည်အထိ နှောင်းပိုင်းတွင်။ အဆိုပါ Beaufighter ရဲ့ Hercules အင်ဂျင် poppet အဆို့ရှင်အင်ဂျင်မှဘုံရဲ့ဆူညံဆို့ရှင်ဂီယာပါဝင်ခြင်းမရှိသေးပေသောစွပ်အိတ်အဆို့ရှင်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါကအင်ဂျင်၏ရှေ့မှာလျှော့ချဆူညံသံအဆင့်ကိုအများဆုံးသိသာခဲ့သည်။
အအရှေ့တောင်အာရှပြဇာတ်ရုံထဲမှာ, Beaufighter Mk VIF ကမြန်မာနိုင်ငံနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင်ဆက်သွယ်ရေး၏ဂျပန်လိုင်းများဆန့်ကျင်တညဉျ့မစ်ရှင်အပေါ်အိန္ဒိယကနေ operated ။ အဆိုပါမြန်နှုန်းမြင့်, low-level တိုက်ခိုက်မှုများမကြာခဏရက်စက်စွာရာသီဥတုအခြေအနေများကြားမှအလွန်ထိရောက်သော ရှိ. , ယာယီပြုပြင်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု facilities.South အရှေ့အာရှ
DAP Beaufighters အနောက်တောင်ပစိဖိတ်ဒေသပြဇာတ်ရုံထဲမှာတော်ဝင်သြစတြေးလျလေတပ်ယူနစ်မှာရောက်လာမီ, Bristol က Beaufighter Mk IC Anti-ရေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးအတွက်အလုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဤအကျော်ကြားဆုံးသူတို့ USAAF A-20 Boston နှင့် B-25 Mitchell နှင့်အတူ-operated တွဲဖက်ထားတဲ့အတွက် Bismarck ပင်လယ်ပြင်၏တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ အမှတ် 30 တပ်မှ RAAF Beaufighters တိုက်ခိုက်ဗုံးကြဲလေယာဉ်၏လှိုင်းတံပိုးသည်အလေးလံသောဖိနှိပ်မီးပေးရွက်တိုင်အမြင့်မှာပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်ယာဉ်တန်း, သူတို့ကတော်ပီဒိုတိုက်ခိုက်အောက်မှာသောအထင်အမြင်အောက်မှာအမေရိကန်အလယ်အလတ်ဗုံးကြဲလေယာဉ်များကဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုများကိုကျော်သွားမှထိတွေ့လာသူတို့ကိုထွက်ခွာခြင်း, Beaufighters ဆီသို့ဦးတည်သူတို့၏သင်္ဘောများလှည့်များ၏ဆိုးဝါးနည်းဗျူဟာအမှားလုပ်လေ၏။ အဆိုပါ Beaufighters (20 မီလီမီတာ) စက်သေနတ်မှာသူတို့ရဲ့လေး 303 မီလီမီတာနှာခေါင်းအမြောက်များနှင့်ခြောက်လတောင်ပံ-တပ်ဆင်ထား .7.7 နှင့်အတူပြေး strafing စဉ်အတွင်းသင်္ဘော '' Anti-လေယာဉ်သေနတ်များ, တံတားများနှင့်အမှုထမ်းအပေါ်အများဆုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရက်စက်မှု။ ရှစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လေးဖျက်တယောက် Beaufighter အပါအဝင်ငါးဦးလေယာဉ်ပျံ၏ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်နစ်မြုပ်ခဲ့သည်။
နှောင်းပိုင်းတွင် 1944 မှစ. , RAF Beaufighter ယူနစ်နောက်ဆုံး 1946 အတွက်ဆုတ်ခွာ, ဂရိပြည်တွင်းစစ်အတွက်စေ့စပ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ Beaufighter လည်းပေါ်တူဂီ, တူရကီနှင့်ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ၏လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့များကအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာအစ္စရေးလေတပ်အားဖြင့်ခေတ္တအသုံးပြုခဲ့သည်။ source ဝီကီပီးဒီးယား